I-Raane Tianeptine hemisulfate monohydrate powder (1224690-84-9) - Phcoker
I-Raw Tianeptine i-hemisulfate monohydrate powder (i-1224690-84-9) ividiyo
I-Raw Tianeptine hemisulfate monohydrate powder (1224690-84-9) Imininingwane
Igama Product I-Raane Tianeptine hemisulfate monohydrate powder
Igama leKhemikhali Tianeptine hemisulfate monohydrate; 1224690-84-9; I-heptanoic acid,
I-Drug Class Ushintsho & Fine Amakhemikhali
CAS Inombolo 1224690-84-9
I-molecular Fi-ormula C42H56Cl2N4O14S3
I-molecular Weziyisishiyagalombili I-1008.004 g / mol
IMisa ye-Monoisotopic I-1006.233 g / mol
Ukuxuba Pi-oint 1800 ℃
Ukubilisa Pi-oint 269.8 ° C ku-760 mmHg
Sukufaneleka I-soluble e-Freetly Emanzini kanye ne-methanol ne-dichloromethane
Sukuhlushwa Tukushisa Indawo enomile epholile
Aukuphikisana I-tianeptine sodium ingasetshenziswa ekomidini le-Tricyclic ne-psychostimulant
I-Tianeptine sodium inomsebenzi wezakhi zokulwa nezilonda nezokuvikela. Ukucindezeleka
I-Raane Tianeptine hemisulfate monohydrate (THM) powder (1224690-84-9)
I-Raane Tianeptine i-hemisulfate monohydrate powder, ebizwa nangokuthi iTianeptine Sulfate, inguqulo ethuthukisiwe yefayili ye-tianeptine usawoti sodium. Akuyona i-hygroscopic, kulula ukuyiphatha, ihlehla kalula, futhi ihlala kabili isikhathi eside. Izo zonke izinzuzo ezifanayo njenge-Tianeptine Sodium, ifomu le-sulfate kuphela elinomzuzu wokuphila wamahora angu-5-6, ngakho lihlala kabili uma i-tianeptine sodium. Ngenxa yalokhu, abacwaningi bayodinga izikhathi ezingu-2-3 inani le-sulfate ukufezekisa imiphumela efunayo abayithandayo kusuka kwi-sodium. I-Sulfate nayo iyancipha kakhulu kokubili ukunambitheka kanye ne-viscosity.
I-tianeptine i-hemisulfate monohydrate ibhekwa njenge-serotonin yokuvuselela kabusha i-serotonake (SSRE) esetshenziselwa ukuphatha ukucindezeleka. I-Tianeptine yasungulwa eFrance kuma-1960 futhi isetshenziswe kulo lonke ingxenye yokugcina ye-2000s.
Kanti futhi ngezinye izikhathi kusetshenziselwa ukwelapha isifo sofuba esiswini noma i-asthma. Ezimweni ezisindayo kubikwa ukuthi zenze imiphumela yokuzijabulisa efana ne-opioid njenge-sedation nokuvuselela, ukuthuthukiswa okugqugquzelayo nokuzijabulisa lapho kulawulwa.
I-Tianeptine i-hemisulfate monohydrate (THM) powder (1224690-84-9) Indlela yokusebenza
Enye yezinyathelo eziyinhloko zokwenza i-Tianeptine hemisulfate monohydrate ukukwandisa i-serotonin (5-HT) ebuchosheni nasemaphaketheni. Ngokungafani nezinhlanganisela eziningi ze-tricyclic, i-Tianeptine ayibonakali ihlotshaniswa nokunciphisa ekusebenzeni kwengqondo noma umsebenzi wezimoto. Kubonakala sengathi kunomsebenzi ohlelweni lwe-glutamatergic, oluxoshwa ukuthi lube yindlela yokulwa ne-antidepressant inoveli.
Ngokukhuphula i-serotonin, i-Tianeptine hemisulfate monohydrate inendlela ehlukile kuma-SSRI wendabuko. Ucwaningo lwamuva luye lwahlola imiphumela ye-Tianeptine ngaphakathi kohlaka lwe-neuroplasticity hypothesis yokucindezeleka, lapho kungase kube nomsebenzi othile. Ucwaningo lwamuva lubonisa ukuthi iTianeptine ingase ihlanganyele ne-adenosine A1 receptors.
Ngaphezu kwalokho, ucwaningo lwamuva olushicilelwe ku-2014 lubonisa ukuthi i-Tianeptine ingasebenza njenge-m-opioid receptor (MOR) agonist. Abacwaningi basebenzise ama-radioligand ezibophezelayo kanye nezibalo zokusebenza ezisemthethweni ukuthola i-Tianeptine njenge-ag agonist ephumelelayo. Ibuye i-agonist egcwele o-opioid kodwa ehlangene kakhulu. I-tianeptine yayingasebenzi kumawebhusayithi we-k-opioid receptor.
Sebenzisa we Tianeptine hemisulfate monohydrate (THM) powder (1224690-84-9)
▪ Ukucindezeleka okucindezelayo
▪ Izimpawu zokulwa nokukhathazeka nokucindezeleka kanye ne-nootropic
Ukusebenza okunengqondo nokukwazi ukuthuthukisa ikhono lokufunda
▪ Ubuhlungu be-muscle
Kunconywe i-Tianeptine hemisulfate monohydrate (THM) powder (1224690-84-9) Isilinganiso
I-tianeptine hemisulfate monohydrate isilinganiso ngokuvamile i-25 mg kanye, noma kabili ngosuku. Ngisho nalapho uqala ngesilinganiso esincane, kungcono ukuyikhawulela ku-2 noma izinsuku ezingu-3 ngesonto okungenani izinsuku ezingu-3 - 4 phakathi.
I-tianeptine i-hemisulfate monohydrate ifika efomini noma i-powder ifomu. Kunconywa ukuthi uqale ngesilinganiso esincane futhi ukwandise ngemali encane kuze kube yilapho isilinganiso esifanele sitholakale. Ukwengeza, amanani amancane anciphisa amandla okuba nomlutha, ukuhoxiswa okukhulu, nokubekezelelana.
Amanani we-50 - 75 mg angashukumisa. I-Tianeptine hemisulfate monohydrate umthamo wokuzijabulisa> 100 mg ingabangela ukuzwa okukhulu kwe-Tianeptine hemisulfate monohydrate.
Izinzuzo ze-Tianeptine hemisulfate monohydrate (THM) powder (1224690-84-9)
♦ I-Tianeptine hemisulfate monohydrate ithuthukisa ubuchopho be-brain etlastic and decreases depression. I-neuroplasticity ikhono lobuchopho lokujwayela nokushintsha uma ufunda; ukufaka isandla ekusebenzeni okungcono kwengqondo nokuthuthukisa ikhono lokufunda.
♦ Ukuhlola iziguli ze-90 ezine-PTSD kubonise imiphumela emihle ngokusetshenziswa kwe-tianeptine hemisulfate monohydrate. Ucwaningo luye lwabonisa nokuthi ngokuphathwa nge-tianeptine sulfate nokunciphisa okuphawulekayo ekukhathazeni kwesifo. I-Tianeptine i-hemisulfate monohydrate enikezwe iziguli ezigugile ibonise ukuthuthukisa ukukhathazeka umsebenzi we-neurocognitive nokuthuthukiswa kwemizwelo.
♦ Izifundo zezilwane nezomuntu zenzeke ekwelapheni kwesifo sikaParkinson nge-Tianeptine hemisulfate monohydrate, esibonisa imiphumela ethembisa ekuthuthukiseni izikolo zempilo yengqondo.
♦ Ukuhlolwa kwangaphambili kweziguli ze-68 nge-ADHD sekuphelile ukuthi izibalo eziwusizo zithuthuke kakhulu futhi ukuthi iTianeptine hemisulfate monohydrate inenzuzo ekunikeni amandla okunakwa okungcono nokunciphisa ukuziphatha okungasebenzi.
♦ I-Tianeptine i-hemisulfate monohydrate iphinde ibe i-analgesic (i-painkiller) ephumelelayo, ngisho nabantu ababhekene nobuhlungu obungapheli. Kuyindlela ephumelelayo yokuvimbela izimpawu ezihlobene nezindaba zezempilo emathunjini.
♦ I-Institute of Medicine Yezokwelapha eCaracas yenza uhlolo lwe-52 lwamaviki olulinganiselwe lwezingane ezine-asthma. Iziguli ezinikezwe i-Tianeptine hemisulfate monohydrate zenze ukwanda okukhulu komsebenzi wamaphaphu.
♦ Nakuba kudingeke ucwaningo olwengeziwe, ukutadisha amadoda e-237 ne-ED kunqume ukuthi i-tianeptine ingaba ukwelashwa okuphumelelayo.
♦ Imiphumela ka-Tianeptine ye-anxiolytic ayithinti kabi i-acetylcholine noma umsebenzi wezinhliziyo, okwenza i-tianeptine ibe yindlela enhle kakhulu kubantu asebekhulile kanye nabanye
I-Raw Noopept enamandla (157115-85-0)